Gufgaf|Online प्रेमगीत ३ मा प्रदिपको जोडी निति ?
प्रेमगीत ३ मा प्रदिपको जोडी निति ?
गफगाफ- निर्माता सन्तोष सेनले अभिनेता प्रदिप खड्कालाई लिएर चलचित्र प्रेमगीत ३ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । हाल चलचित्रको कथामा काम भइरहेको छ । चलचित्रका लागि प्रदिप पक्का भए पनि उनको जोडीको रुपमा कुन अभिनेत्रीले काम गर्ने भन्ने फाइनल भएको छैन । यतिबेला प्रदर्शन भईरहेको सिनेमा लभ स्टेशनको प्रचारका क्रममा अभिनेत्री जसिता गुरुङलाई प्रेम गीत ३ मा काम गर्न लागेको प्रश्नले सताएको थियो । तर उनी सिनेमामा हुने कुरा भने छैन ।
तर पछिल्लो समय प्रकाशित भएका समाचारहरुलाई मान्ने हो भने प्रेमगीत ३ मा अभिनेत्री निति शाहले काम गर्ने पक्का जस्तै छ । त्यसो त अभिनेत्री शाहले पनि आफूलाई चलचित्रका लागि अफर आएको स्विकार गरेकी छन् । प्रदीपको चलचित्र लभ स्टेशन हेर्न हल पुगेकी नितिले मिडियासँग कुरा गर्दै सिनेमामा काम गर्ने सम्भावना भएको तर अहिले फाईनल भने नभएको बताएकी छिन् । उनको कुरा सुन्दा उनी सिनमाको लागि लगभग फाईनल भएको बुझ्न सकिन्छ ।
यतिबेला स्कृप्टमा काम भइरहेको छ । मैल स्कृप्ट मागेको छु । यदि मनर्पयो भने अवस्य गर्नेछु,अभिनेत्री शाहले भनिन् । उनले आफूलाई अभिनेता प्रदीप खड्कासँग काम गर्ने इच्छा रहेको समेत बताएकी छन् । यस अघि अभिनेत्री शाह र अभिनेता खड्काले डिसहोमको एक विज्ञापनमा काम गरेका छन् । यसमा यी दुईको केमेस्ट्रीलाई दर्शकले रुचाएका थिए । नीति मिस नेपाल २०१७ की सेकेण्ड रनरअप हुन् । उनले हालसम्म चलचित्रमा भने काम गरेकी छैनन् ।